Jubaland oo Odayaasha dhaqanka ka dalbatay ka qayb qaadashada dagaalka Al-shabaab (Sawiro) – Radio Daljir
Janaayo 11, 2019 11:22 b 0
Maamulka Jublanad oo maalmihii udambeeyay ku jiray diyaar garow ku aadan sidii ay Al-shabaab uga saari lahaayeen degmooyinka ay gacanta ku hayaan ee gobolka Jubada hoose ,ayaa waxa ay kulamo gooni gooni ah ay la qaateen Odyaasha dhaqanka ,waxayna ka codsadeen in ay kala qayb qaataan dagaalka Al-shabaab iyo horumarinta degmooyinka .
Wasiirka maaliyada maamulka Jubaland mudane Cabdirshiid Jire Qalinle iyo wasiirka arimaha gudaha ee maamulka Jubaland Maxamed Warsame Darwiish ayaa kamid ahaa mas,uuliyiintii la kulantay wax garadaka Jublanad ,wuxuuna wasiirka maaliyada dhankiisa uu balan in degmada Afmado ay ka hirgalin doono Xafiisyo lagu qaado canshuurta degmada .
Madaxweynaha Jublanad Axmed Madoobe ayaa maalmo ka hore waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-shabaab isgaoo ku booqday ciidamada xeryahooda .
Axmed Madoobe ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in aysan wax taageero ah ka siinin dagaalka lagula jiro Argagixisada ,balse Jublanad ay isku tashan doonto .
Suuqa wayn ee Bakaaraha Muqdisho oo qayb ka mid ah dab uu qabsaday